Soo dejisan Unchecky 1.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Unchecky
Unchecky – waa adeeg yar oo loogu talagalay in looga hortago rakibidda software-ka aan la rabin. Qalabka korontada wuxuu ka ilaaliyaa kombiyuutarka isticmaalaha ka hortagida rakibyada khatarta ah ee khatarta ah ama sharkiisa sida adware iyo qalabka wax lagu xiro ee kombiyuutarka oo ay la socoto software-ka. Unchecky kormeerka geedi socodka rakibo oo ka digtoonaa isticmaalaha ku saabsan qaybaha software-ka ee aan rasmiga ahayn ama si toos ah u diidaya dhammaan soo jeedinta la xidhiidha rakibidda qaybaha xayeysiiska. Unchecky waxay taageertaa cusbooneysiinta gawaarida ee hadda la socota iyada oo la kordhinayo xogta database kaas oo ah fure u ah difaac lagu kalsoon yahay oo ka dhan ah codsiyada aan loo baahnayn.
Ogaanshaha software-ka aan loo baahnayn ee maskaxda ku haysa qadarka habka rakibida
Diidmada automatic ee soo jeedinta saddexaad
Digniin ee software aan la rabin
Cusbooneysiin si toos ah oo ku socda qaabka hadda
Soo dejisan Unchecky
Faallo ku saabsan Unchecky
Unchecky Xirfadaha la xiriira